Booliska Dalka Kenya oo Shaaciyay Sawirada 9-Qof oo Argagixiso ah – Radio Muqdisho
Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa maanta shaaciyay sawirada 9-qof oo argagixiso ah,kuwaasi oo ay ku tilmaameen inay qatar ku yihiin ammaanka dalka.
Dowlada ayaa ku micneysan raggan in ay yihiin dhiig cabayaal hubeysan oo qatar ah.
Ciidamada booliska ayaa ka dalbaday shacabka in ay hay’adaha ammaanka ku soo war galiyaan warbixinada la xiriira soo qabashada raggaasi.
Ciidamada booliska ayaa sheegay Cabdifatax Abubakar Cabdi uu yahay ninka ugu muhiimsan 9-qof oo ay shaaciyeen sawiradooda.
Cabdifatax Abubakar Cabdi ayaa lala xiriirinayaa in uu ka dambeeyay weeraradii uu dhiiga badan ku daatay ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Mepeketoni ee gobolka xeebta.
Ciidamada booliska ayaa sheegay in Cabdifatax Abubakar Cabdi uu qorsheeynayo weeraro kale oo ka dhaca gobolka xeebta,iyadoo la rumeysanyahay in isaga iyo saaxiibadiisba ay ku dhuumaaleysanayaan keymaha Boni.
Magacayada kale oo ay booliska soo bandhigeen ayaa waxaa kamid ah Suleiman Mohamed Awadh, Abdalla Salim Marumu, Mohamed Abubakar Mohamed iyo Muumin Abdalla Muumin oo dhamaatoodba ka soo jeeda gobolka xeebta.
Hay’adaha ammaanka ayaa sidoo kale shaaciyay magaca Ismael Shosi Mohamed oo loo yaqaano Ismael Mmanga,kaasi oo maleeshiyaadka Al-shabaab u qaabilsan magaalada Mombasa.
Ismael Shosi Mohamed ayaa lala xiriirinayaa dilka Sheikh Mohamed Idriss iyo wadaado kale oo lagu dilay magaalada Mombasa ee caasimadda gobolka xeebta.
Magacyada kale oo ay shaaciyeen hay’adaha ammaanka dalka Kenya ayaa waxaa ka mid ah Hamisi Mwacheti oo loo yaqaano Rasta bilal, Mahir Khalid Riziki iyo Abubakar Majani.